Posted by မြရွက်ဝေ at 5:09 PM
စားချင်စရာလေးတွေဗျာ။ သားရေကျအောင် တမင်လုပ်ထားသလားပဲ ..
Gtalk ကနေ ဖုန်းအလကား ခေါ်ကြရအောင်!!! ဆိုတာလေး လာဖတ်စေချင်ပါတယ်။
စားကောင်းမယ့်ပုံနော်.. အားတဲ့ရက် စမ်းချက်ကြည့်ဦးမယ်... အမက ဂျပန်စာတွေ သိပ်မချက်တတ်တော့ မလုပ်စားဖြစ်ဘူး.. (မြန်မာအစားအစာလည်း ကျွမ်းတယ်လို့ မထင်နဲ့နော်.. စားလို့ဖြစ်ရုံပါပဲ.. အဟီး.. :D )
နောက်ထပ်နည်းလေးတွေ ရှိရင်လည်း ရေးပေးနော.်. :)
thanks for the recipe..the potos..
its makes cooking so much fun..and simple!
do upload more of such posts naw!
i will try the dish out soon, ..as soon as i can find my guine pig :P
ဟင်းချက်ပြထားတာလဲ သွားရေ ယိုတယ်။ ပို့စ်လေဘယ် တတ်ထားတာကို သဘောကျတယ်။ ဘာတဲ့…၊ ရမ်းသမ်း Cook တဲ့။ :D
thx for the recipe..d potos..
makes cooking much more easier and fun!
i will sure to try it out..as soon as i can find my lu gyi man to be guine piggie :P
ps:..do post more of such stuffs naw..chit mama
စားချင်စရာလေးဗျ ဒါနဲ့ "မီဆို"ပဲအနှစ် ဆိုတာ မရှိရင် ဘာနဲ့ အစားထိုးလို့ရလဲဗျ
မဇနိ---> လာလည်ရင် ချက်ကျွေးမယ်နော်။
ဘလူးဖီးနစ်---> တမင် သွားရည်ကျကောင်လုပ်ထားတာရှင့် :P
မနု-စံ---> ညီမလဲ လျှောက်ချက်ကြည့်တာ။ ဖြစ်တာလေးဘဲ ဘလော့ပေါ်ရောက်တယ်။ မကောင်းတာတွေ ဖွက်ထားတယ်။ :D
dilo bear---> မြှောက်ပေးတဲ့သူရှိတော့ ကြိုးဂျားရမှာပေါ့။
ကိုကလို---> ချက်သမျှအားလုံး ရမ်းသမ်းcookတွေလေ။
mgthajan--->မီဆိုအနှစ်လုပ်နည်းကို ဝီကီမှာ ဒီလိုရေးထားတာဘဲ။ http://en.wikipedia.org/wiki/Miso ပဲကြီး (Soybean) ကို အဓိကသုံးထားတယ် ထင်ပါတယ်။
ဂျပန် အစားစာတွေကတော့ အစ်မ နဲ့မနုစံ ဆီပေါ့ တစ်ယောက်တိုးသွားပြီး ဟားဟား လေဘယ်က တယ်ဂွဒ်ပါလားဗျး) သီချင်းတွေ နားထောင်ကောင်းတယ် အစ်မရေ့ YTU (1) သီချင်းလေးလိုချင်လိုက်တာ ။